BOU's Itinerary: January 2012
ဘန်ကောက်မြို့မှ မိသားစုအလိုက် နေ့ချင်းပြန်သွားနိုင်သော ခရီးစဉ်များ
“ဘန်ကောက်မြို့၏ မြောက်ဘက်ရှိ မြန်မာနှင့်ထိုင်းတို့အတွက် တန်ဖိုးထားရသော သမိုင်းရှေးဟောင်းဝင်မြို့တော် အယုဒ္ဓယမြို့”
န်ကောက်မြို့အနီး တစ်နေ့တာ နေ့ချင်းပြန် သွားလည်နိုင်မယ့် ဘုရားဖူးခရီးအဖြစ် အယုဒ္ဓယမြို့ကို သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ မိသားစုသွားလည်မယ့်ထဲမှာ လူကြီးတွေလည်း ပါမယ်ဆိုရင် ဘုရားဖူးအပန်းဖြေခရီးအဖြစ် ဒီခရီးစဉ်လေးက အဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်မြို့မှ မနက် (၇)နာရီခွဲလောက် ထွက် အယုဒ္ဓယမြို့ကို မနက်(၉)နာရီလောက်ဆို ရောက်ပါပြီ။ သွားရင်းလာရင်း အပေ့ါအပါးလည်း လွယ်ကူစွာသွားလို့ ရနိုင်တာကြောင့် လူကြီးတွေအတွက် အဆင်ပြေစေနိုင်တာပေါ့။
အယုဒ္ဓမြို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာနိုင်မယ့် လင့်ဖြစ်ပါတယ်
“ဘန်ကောက်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ ဆာရာဘူရီ”
ဆာရာဘူရီမြို့မှာတော့ အီတလီကျေးရွာငယ် ပုံစံတူ အပန်းဖြေစခန်း၊ ရေတံခွန်နဲ့ ဘုရားများစွာရှိပါတယ်။
ဗဟုသုတအဖြစ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီလင့်လေးကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်
“ဘန်ကောက်မြို့၏ အရှေ့ဘက်ရှိ ပတ္တရားမြို့”
ပတ္တရားမြို့မှာ နာမည်ကျော် အပန်းဖြေကမ်းခြေရှိတဲ့အပြင် ပတ္တရားမြို့ရဲ့ နာမည်ကျော်လေဆာပစ်ဘုရားကိုလည်း ဖူးမျှော်နိုင်တဲ့အပြင် ကမ်းခြေမြို့ရဲ့ စည်ကားမှုများမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပတ္တရားမြို့သွားရင်း TigerTemple ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားရင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသေးတယ်။
အထက်ပါ တနေ့တာခရီးစဉ်များက မိသားစုတို့အတွက် အပန်းဖြေဘုရားဖူးခရီးစဉ်များဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်သက်သော ခရီးစဉ်များကို ရွေးချယ်နိုင်ပါကြောင်း သတင်းစကားလက်ဆင့်ပါးလိုက်ပါရစေ...
Posted by BOU Agent at 12:41 PM No comments:
4-D & 3-N (Siem Reap/Angkor Wat)
Day 1: Poipet boder area to Siem Reap/Angkor Wat
- Pick up from hotel in bangkok
- Arrive at border area take you through the border to have lunch and pick up from border by car and car to Siem Reap, it's the gate way to Angkor Wat
- Arrive at Siem Reap the city of Angkor, check in at hotel and then continue Temple tour to see killing field (the genesis killing place during Poi Pet regime From 1975-1979) free explore around Siem Reap city and shopping
- Visiting Sunset on Phnom Bakeng Hill
Day 2: Full Day in Angkor Wat Temple
- Transfer to visit to Temples
- Visit to Night Market in Siem Reap
- Visiting in Tonle Sap Lake
(This Lake isagreat lake in ASEAN Countries. Take boat and to see floating village )
- Vsiting to see Kulen Mountain
Day 4: come back to Thai - Cambodia Area by car
- Pick up and travel to Thai - Cambodia Area and departure to Bangkok.
Refreshment for 3times (Breakfast, Lunck & Dinner)
Entrance Fees in Angkor Temples
(if advance request, Cambodia visa & re-entry for Thailand)
Itinerary Prices are depend on Travel Dates!
Posted by BOU Agent at 12:25 PM No comments:
Siem Reap (Temples Only)
Welcome at Siem Reap International Air port or Bus station transfer to hotel for
Continue to visit Roluos Group: Bakong, Preah Ko, Lolei. Afternoon visit Kompong Phluk (The tonlesap lake ) Stay overnight at hotel.
In the morning visit Banteay Srey temple the north east of Siem Reap town 48 Kilo
Mets and Banteay Samrè temples. Afternoon visit South Gate of Angkor Thom, Bayon
Complex. Baphoun, Former Royal Palace, Terrace of the elephants and Terrace of
the Leper king ,Angkor Wat Temple and Watching sunset at Bakheng Mountin
In the morning visit Preah Khan ,Neak Pean ,Tasom, Pre Rup,Sras Srang Afternoon
visit Banteay Kdei ,Taprohm Takeo and transfer to airport or the Bus station for
+Tour Prices include;
- pick up from the air- port
- Cool towels during the tours
- Cool waters during the tours
- Entrance Ticket fee to Temples
- Boat tickets to Tonlesap Lake
-Break fast at the hotel- Lunch, Dinner at local Restaurant and Apsara Dance show
-3 Star Hotels accommodations with sharing Room
Posted by BOU Agent at 11:49 PM No comments:
ဘန်ကောက်မြို့မှ မိသားစုအလိုက် နေ့ချင်းပြန်သွားနိုင...